Accueil > Gazetin'ny nosy > Noho ny tsy fahombiazan’ny fanjakana: Tafakatra 1.500 ariary ny kapoakam-bary
Noho ny tsy fahombiazan’ny fanjakana: Tafakatra 1.500 ariary ny kapoakam-bary
Fitondram-panjakana tokana ve no mitana ny fahefam-panjakana eto Madagasikara sa maromaro ? Ary iray tsy mivaky ve ny lafin-tanin’i Madagasikara sa misy faritra « mizaka tena » na « distrika mahaleotena » eto ka tsy eo ambany fiahian’ny fitondrana foibe ?
Izany no zava-mitranga any amin’ny faritra sasany any satria dia misy ny miliba manao izay danin’ny kibony. Tsy miraharaha izay lalàna misy satria mpitondra fanjakana « tsy mpanara-dalàna » rahateo no misy eto.
Tranga iray azo ambara ho porofo mitohoka amin’ny tenda amin’izany endrika ibaribarian’ny tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana foibe izany ny tsy fahafahany mampitovy lenta ny fitantanana ny tany sy ny firenena. Any Sambava any mantsy izao dia midangana tsy hita avanavana ny vidim-piainana. Ny kapoakam-bary no avotana 1.500 ariary, ary ny rano fisotro iray tavoahangy no mananika ny 5.000 ariary, raha mbola latsaky ny 2.000 ariary amin’ny faritra hafa eto amin’ny Nosy. Ny manga iray, amin’izao fotoam-piakaran’ny manga izao, dia vidiana 3.000 ariary ny iray any an-toerana. Ny labiera moa dia tena manaka-danitra satria 10.000 ariary ny iray tavoahangy. Ny vatotr’akoho no vidiana 30.000 ariary.
Noho ny fiakatry ny vidin-davanila hatrany amin’ny Iray tapitrisa ariary ny iray kilao, hono, no anton’izany. Izany hoe faritra manan-karena ange izany i Sambava e ! Satria mampidi-bolabe ny mpamboly na mpandraharahan-davanila dia toa heverina ho rariny raha miakatra manara-davahana an’izany ny vidim-piainana.
Tsy tokony hadinoina anefa fa ao Sambava ange ka tsy mpandraharahan-davanila avokoa ny olona e ! Tsy mpamboly lavanila avokoa koa. Misy mpiasampanjakana tsotra ao, na mpampianatra na mpitsabo, na mpiasa amin’ny birao. Misy mpiasa amin’ny sehatr’asa hafa ao, na amin’ny tranom-barotra na vondrom-barotra (société) hafa, izay ny lalànan’ny asa no mamaritra ny karamany, raha voahajan’ny mpampiasa. Misy mpiasa tena koa ao na mpivarotra tsotra na mpanasa lamba na mpitarika posiposy na mpamily fiarakaretsaka sy ny hafa e ! Ny tsy an’asa moa dia tsy tenenina intsony.
Tsorina fa endriky ny tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana izany. Tsy azon’ny mpitondra atao mihitsy ny mialokaloka na miala andraikitra amin’ny hoe « efa mampihatra ny lalànan’ny tolotra sy tinady isika ka tsy misy azon’ny fanjakana atao ». Famotehana ny vahoaka maro an’isa izany satria araka ny voafaritra etsy aloha dia tsy mpandraharaha na mpamboly lavanila avokoa ny any Sambava.
Raha izay « lalànan’ny tolotra sy tinady » sy ny
« fanalalahana » izay no foto-kevitra ijoroan’izao fanjakana izao dia aleo tsy misy fa foanana ny rafitra « fanjakana » satria tsy misy antony ametrahana rafitra tsy hanao na inona na inona fa hoe « efa fanalalahana » izao na « efa ny lalànan’ny tolotra sy tinady » no mihatra.
Tsy misy valaka amin’ny manjo ny mponina any Taolagnaro izany. Miakatra be koa ny vidim-piainana any Taolagnaro hatramin’ny nisian’ny tetik’asa Qmm satria ambony, hono, ny karaman’ny mpiasa ao, ary ny vahiny miasa ao aza dia mitovy fidiram-bola amin’ny sandany any ivelany. Dia ireo tsy ao anatin’ny « Qmm » no mifafa ny kihony. Toraka izany koa ny tany Moramanga sy Toamasina, noho ny tetik’asan’Ambatovy.
Tsy ny fisehon’ny fidangan’ny vidim-piainana any amin’ireo faritra notanisaina ireo ihany no ahitana taratra izany tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana izany fa amin’ny faritra rehetra manerana ny Nosy mihitsy koa. Marina fa tena mampiteny ny moana, ohatra, ny vidim-piainana any Sambava, fa mihatra amin’ny aina koa ny fiakatry ny vidim-piainana andavanandro amin’ny faritra rehetra, na eto andrenivohitr’Antananarivo, izay tokony « ho akaiky vilany feno arina » aza, ka tokony ho voajerin’ny mpitondra fanjakana avy hatrany, na any ambanivohitra rehetra any.
Tsy ny fidangan’ny vidim-piainana ihany no porofo mitohoka amin’ny tenda ho amin’izany tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana izany fa io fianahan’ny tsy fandriampahalemana manerana ny nosy io koa. Toraka izany koa io olana amin’ny fanararaotan’ny sasany mandroba ny harem-pirenena etsy sy eroa io. Ity raharaha iray momba ny harena ankibon’ny tany ity aloha dia ny mpitondra fanjakana no mioty tombontsoa manokana amin’izy io satria ry zareo no manome alalana ny vahiny hitrandraka sy handroba ny harem-pirenena eto.
Mbola endriky ny tsy fahombiazan’ny fitondram-panjakana ary taratry ny tsy fisian’ny fanjakana mihitsy koa ny olana ara-tany eto.
Marobe e ! Tsy hita hotanisaina. Izao fampahantram-bahoaka tsy misy fitsaharany izao no endrika sy porofo ankapobeny fa fitondram-panjakana tsy mahavita azy no misy eto.